/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); လင္းဦး(စိတ္ပညာ) _ Lin Oo: နား​ခံ​ေတာ်နှင့်​ နတ်ရှင်​ေနာင်
Labels: မျှ​ေဝ, သိသမျှ
အဂင်္လိပ်လက်ထက် ကိုလိုနီ​ေခတ်က ပညာအလင်း​မဂ္ဂဇင်း​တွင် လယ်တီပဏ္ဍိတ ဆရာဦး​ေမာင်ြကီး​သည် နတ်ရှင်​ေနာင်အမည်ြဖင့်​ ရာဇဝင်ဝတ္ထုြကီး​တစ်ပုဒ် ​ေရး​သား​ခဲ့​၏ မဂ္ဂဇင်း​တွင် ထည့်​သွင်း​ြပီး​ေနာက် စာအုပ် အြဖစ်ြဖင့်​ ထုတ်​ေဝလိုက်၏။
ကျွန်ုပ်မှာ လယ်တီပဏ္ဍိတနှင့်​ တစ်သက်လံုး​တွင် သံုး​ြကိမ်မျှသာ စကား​ေြပာဖူး​ေသာ်လည်း​ ဆရာသမား​နှင့်​ ပတ်သက်၍ သံ​ေယာဇဉ်ြငိကာ ရင်း​နှီး​ြခင်း​ရှိပါသည်။ အ​ေြကာင်း​မူကား​ ကျွန်ုပ်၏ ​ေကျး​ဇူး​ရှင် ​ေနာင်​ေတာ်ရင်း​ ဆရာရင်း​ြဖစ်​ေသာ ရန်ကုန်ြမို့​ ဘုရား​ြဖူတိုက် “ကဝိန္ဒာဘိဝံသ ပရိယတ္တိ သာသနာ့​ဟိတ ဓမ္မာစရိယ” ပ-သ-အ(က) သီး​ြခား​စာချ၊​ မန္တ​ေလး​ သကျသီဟဓမ္မာစရိယဘွဲ့​နှင့်​ “ဒုတိယ သစ္စဝါဒီ ဋီကာ-ကာရ” ​ေရွှတံဆိပ်ဆုရ၊​ ရန်ကုန်ြမို့​လံုး​ဆိုင်ရာ ဓမ္မာစရိယ စာချအဖွဲ့​ြကီး​၏ ဥက္ကဌ ဆရာ​ေတာ် ဦး​ကဝိန္ဒမှာ လယ်တီပဏ္ဍိတ ဦး​ေမာင်ြကီး​ ကိုး​ကွယ်​ေသာ ဆရာ​ေတာ်တစ်ပါး​ ြဖစ်​ေသာ​ေြကာင့်​တည်း​။ လယ်တီပဏ္ဍိတ၏ ဆရာ လယ်တီဆရာ​ေတာ်မှာ မန္တ​ေလး​ သုဒဿန ဒုတိယ စံ​ေကျာင်း​၏ တပည့်​ြဖစ်၏။ ဦး​ကဝိန္ဒ၏ ငယ်ဆရာ ဝါစ္စဝါစကဋီကာသစ်နှင့်​ ဝံသ​ေမဒပကာသနီကျမ်း​ြပု ဒုတိယဘုရား​ြဖူဆရာ​ေတာ် အရှင်နန္ဒိယမှာလည်း​ မန္တ​ေလး​ သုဒဿနာ ဒုတိယစံ​ေကျာင်း​၏ တပည့်​ပင် ြဖစ်၍ အနွယ်ချင်း​ တူရကား​ ဦး​ေမာင်ြကီး​က အထူး​ေလး​ြမတ် ြကည်ညိုခဲ့​ေပသည်။ (ထိုဆရာ​ေတာ် ဦး​ကဝိန္ဒမှာ ၁၂၉၅ ခုနှစ်က ပျံလွန်​ေတာ်မူခဲ့​ရှာ​ေလြပီ။)
ကျွန်ုပ်မှာ လယ်တီပဏ္ဍိတထံ၌ တစ်မိနစ်ခန့်​မျှ နည်း​ခံ၍ မသင်ြကား​ခဲ့​ဖူး​ေသာ်လည်း​ သူ၏ စာ​ေပ၊​ ကျမ်း​စာ၊​ ဝတ္ထုများ​ကိုမူ အထူး​နှစ်ြခိုက်၍ စာပိုဒ်များ​ကို အာဂံုပင် ​ေဆာင်ထား​ခဲ့​ဖူး​ရာ နတ်ရှင်​ေနာင် ဝတ္ထုမှာမူ ကျွန်ုပ်၏ အသည်း​စွဲြဖစ်ပါသည်။ ထိုအခါက နတ်ရှင်​ေနာင် ဝတ္ထုကို စွဲလမ်း​မူး​ရူး​သူတို့​တွင် ကျွန်ုပ်မှာ ထိပ်တန်း​က ပါဝင်ခဲ့​ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် ရာဇဝင်ဝတ္ထု​ေရး​ဆရာ ြဖစ်လာခဲ့​သည်မှာ နတ်ရှင်​ေနာင်ဝတ္ထုကို အ​ေြခြပု၍ နည်း​ဥပ​ေဒသ ယူငင်​ေရး​သား​ြခင်း​ေြကာင့်​ ြဖစ်လာရသည်ဆိုလျှင် လွဲမည် မဟုတ်ပါ။ သို့​ြဖစ်၍ နတ်ရှင်​ေနာင်ဝတ္ထု သို့​မဟုတ် လယ်တီပဏ္ဍိတကို ကျွန်ုပ်၏ ​ေကျး​ဇူး​ရှင်ဆရာ တစ်ဦး​ဟုပင် မှတ်ယူပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ “နား​ခံ​ေတာ်”ဝတ္ထု သူရိယရုပ်စံုသတင်း​စာ၌ ပါြပီး​ေနာက် ဂိမှာနဥတု ဖဂ္ဂုနမာသ တ​ေပါင်း​လအတွင်း​ တစ်​ေန့​သ၌ ရန်ကုန်ြမို့​ အ​ေရှ့​ပိုင်း​ ၅၃ လမ်း​ရှိ တိုက်ခန်း​တွင် ဆရာဦး​ေမာင်ြကီး​နှင့်​ ​ေတွ့​ရာ “သူရိယရုပ်စံုသတင်း​စာမှ ပူတ​ေကနှင့်​ နား​ခံ​ေတာ်ဝတ္ထု​ေရး​သူ မည်သူြဖစ်​ေြကာင်း​ သိလို​ေြကာင်း​” နှင့်​ ​ေမး​ြမန်း​၏။ (ကျွန်ုပ်နှင့်​ သူရိယတိုက် အဆက် ြဖစ်​ေနသည်ကို ဦး​ေမာင်ြကီး​က သိထား​ရင်း​စွဲြဖစ်၍ ​ေမး​ြမန်း​ြခင်း​ြဖစ်၏)
“ ဘာလုပ်မလို့​လဲ ဆရာ”
“ သိချင်လို့​ေပါ့​ ကိုယ်​ေတာ်”
(ထိုအခါ ကျွန်ုပ်သည် ရဟန်း​ဘဝနှင့်​ြဖစ်၏ နား​ခံ​ေတာ်ဝတ္ထုမှာ မန္တ​ေလး​ သကျသီဟ စာချတန်း​ ဝင်​ေနစဉ်က ​ေရး​ခဲ့​ေသာ ဝတ္ထုြဖစ်ရာ ကျွန်ုပ်၏ ပထမဆံုး​ေရး​ေသာ ဝတ္ထုလည်း​ြဖစ်၏။)
“ဟာ …. မဟုတ်တာ၊​ ကိုယ်​ေတာ် ဝတ္ထု​ေရး​တတ်သလား​၊​ စကျာသီဟသမား​ (သကျသီဟ စာ​ေမး​ပွဲ ဆိုလို၏။) တစ်ဦး​က သည်ဝတ္ထုမျိုး​ ​ေရး​တယ်ဆိုတာ မြဖစ်နိုင်ပါဘူး​”
ထို့​ေနာက် ကျွန်ုပ်က ယံုြကည်​ေလာက်​ေအာင် ​ေြပာဆိုမှ အံ့​အား​သင့်​စွာ အတန်ြကာ ​ေငး​ေနြပီး​ -
“ကိုယ်​ေတာ်က တပည့်​ေတာ်ကို သတ်လိုက်တာ​ေပါ့​” ဟု လွှတ်ခနဲ့​ ​ေြပာလိုက်ပါသည်။
“ ဘယ်လိုလဲ ဆရာ”
“ဟာ… တပည့်​ေတာ်က နတ်ရှင်​ေနာင်ကို အမွှန်း​တင် ​ေရး​ထား​တာ၊​ ကိုယ်​ေတာ်က နတ်ရှင်​ေနာင် စစ်ရှံုး​တာ​ေတွ၊​ လိမ်လည်​ေကာက်ကျစ်တာ​ေတွ၊​ ခရစ်ယာန်ထဲ ဝင်တာ​ေတွ ​ေရး​ထား​ေတာ့​ နတ်ရှင်​ေနာင်ကို အထင်​ေသး​ကုန်တာ​ေပါ့​”
“ ဦး​ပဥ္ဇင်း​က​ေတာ့​ မှန်တာပဲ ​ေရး​တာပဲ၊​ ​ေပါ်တူဂီ ရာဇဝင်မှာလည်း​ သည်အတိုင်း​ပါတယ်၊​ မှတ်တမ်း​ေတွလည်း​ ရှိတယ်၊​ မှန်နန်း​မှာလည်း​ အရိပ်အြမွက် အပါသား​ပဲ ဆရာ”
“ဒါက​ေတာ့​ ဟုတ်တာ​ေပါ့​၊​ သို့​ေပမယ့်​ မှန်တိုင်း​ေရး​ရင် ဘယ်​ေကာင်း​မလဲ၊​ ကိုယ့်​အမျိုး​သား​ ဘုရင်ကို နိုင်ငံြခား​သား​ေတွ အထင်​ေသး​ကုန်မှာ​ေပါ့​”
“ ​ေနပါဦး​ဆရာ၊​ နတ်ရှင်​ေနာင်ဝတ္ထုကို ဦး​ပဥ္ဇင်း​လည်း​ သိပ်စွဲတာပဲ၊​ သို့​ေပမယ့်​ ရာဇဝင်နှင့်​ တိုက်ြကည့်​ေတာ့​ မကိုက်တဲ့​အချက်​ေတွ ပါ​ေနတယ်၊​ ဥပမာ…. အိမ်​ေရှ့​မင်း​ ထိုင်း​စစ်ပွဲမှာ ဆံုး​ရတာ နတ်ရှင်​ေနာင်ရဲ့​ လုပ်ြကံချက် ပ​ေယာဂ​ေြကာင့်​ ဆံုး​သလို ဆရာက ​ေရး​ထား​တယ်၊​ ရာဇဝင် အ​ေစာင်​ေစာင်မှာ အရိပ်အြမွက်​ေတာင် ရှာမ​ေတွ့​ဘူး​၊​ ဆရာ့​မှာ မှတ်တမ်း​များ​ ရထား​သလား​”
“ ဝတ္ထု​ေရး​တာ ဘယ်က မှတ်တမ်း​ရ​ေနမှာလဲ ကိုယ်​ေတာ်ရဲ့​၊​ ဖတ်​ေကာင်း​ေအာင် ​ေရး​ရတာ​ေပါ့​”
“ဆရာဝတ္ထု​ေရး​တာ အခန်း​ထဲက စား​ပွဲမှာထိုင်ြပီး​ စိတ်ကူး​ဉာဏ်နဲ့​ချည်း​ ​ေရး​ေနတယ်ထင်တယ်”
“ စား​ပွဲမှာ ထိုင်ြပီး​ စိတ်ကူး​ဉာဏ်နဲ့​ မ​ေရး​လို့​ ဘယ်လို​ေရး​ရမလဲ ကိုယ်​ေတာ်”
“မှတ်စု မှတ်တမ်း​ေတွ ရ​ေအာင်ရှာ၊​ ဇာတ်လမ်း​နဲ့​ ပတ်သက်တဲ့​ ဌာန​ေတွ ကိုယ်တိုင်သွား​ြကည့်​၊​ စပ်ဆိုင်ရာ သိမီလိုက်သူ​ေတွဆီ သွား​ေရာက်စံုစမ်း​ြပီး​ ​ေရး​ဖို့​ေကာင်း​တာလို့​ ​ေြပာတာပါ”
“ ဟဲဟဲ… ​ေနပူလိုက်တာ ကိုယ်​ေတာ်၊​ သည်​ေလာက်ဒုက္ခမခံနိုင်ပါဘူး​၊​ ဝတ္ထု​ေရး​တာပဲ၊​ ရာဇဝင်​ေရး​တာမှ မဟုတ်ဘဲ၊​ တပည့်​ေတာ်​ေတာ့​ ရာဇဝင်ြကည့်​ြပီး​ စိတ်ကူး​ဉာဏ်နဲ့​ပဲ ​ေရး​ေနတာဘဲ၊​ ကိုယ်​ေတာ်လို သန်လျင်တို့​…. အင်း​ဝတို့​…. ဟိုသွား​ သည်သွား​ သွား​ြပီး​ေတာ့​ြဖင့်​ မ​ေရး​နိုင်ဘူး​”
“ ဟုတ်တယ်၊​ ဦး​ပဥ္ဇင်း​ေတာ့​ ကိုယ်တိုင်သွား​ြကည့်​ြပီး​မှ ​ေရး​လို့​ အား​ရတယ်၊​ နား​ခံ​ေတာ်တုန်း​က ဆိုရင် အင်မတန် ပင်ပန်း​တာဘဲ၊​ လွှတ်​ေတာ်မှတ်တမ်း​ေတွဆိုလည်း​ ပုဂံဦး​တင်ဆီက မရအရ ဆွဲယူရတယ်”
“ကိုယ်​ေတာ် ​ေတာ်​ေတာ်အပင်ပန်း​ ခံနိုင်ပါတယ်၊​ ကိုယ်​ေတာ့်​ဝတ္ထုြကည့်​တာနဲ့​ပဲ လံု့​လ ဝီရိယ ဘယ်​ေလာက်ရှိတယ်ဆိုတာ သိနိုင်တယ်”
ဤကား​ ကျွန်ုပ် ရာဇဝင် ဝတ္ထု​ေရး​ဆရာြဖစ်ခဲ့​ရပံုနှင့်​ “နား​ခံ​ေတာ်” ဝတ္ထုအတွက် ကျွန်ုပ်၏ ဆရာတစ်ဆူ မှတ်ယူြခင်း​ခံရ​ေသာ လယ်တီပဏ္ဍိတ ဦး​ေမာင်ြကီး​၏ မှတ်ချက်ချြခင်း​ ခံရပံုြဖစ်​ေပသည်။
Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Monday, April 11, 2011